ဒေါ်လာသန်း(၃၀)ကို ကားမှတ်တိုင်အနီးကမှန်ဘောင်ထဲမှာထည့်ထားပြီး မှန်ခွဲနိုင်ရင်ပိုက်ဆံအကုန်ယူသွားလို့ ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ အာမခံ ကျည်ကာမှန် ကုမ္ပဏီ - Myanmarload
ဒေါ်လာသန်း(၃၀)ကို ကားမှတ်တိုင်အနီးကမှန်ဘောင်ထဲမှာထည့်ထားပြီး မှန်ခွဲနိုင်ရင်ပိုက်ဆံအကုန်ယူသွားလို့ ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ အာမခံ ကျည်ကာမှန် ကုမ္ပဏီ
လွန်ခဲ့သော ၅ လ က 16:37 January 10, 2019
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ... ပစ္စည်းတစ်ခုကို ကြော်ငြာတယ်ဆိုတာဟာ သူများတကာတွေသိပ်မလုပ်တဲ့အရာတွေ နဲ့ သမာရိုးကျလမ်းစဉ်တွေကနေ ခွဲထွက်နိုင် တဲ့ပုံစံတွေကို လုပ်ပြမှသာလျှင် လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံရပြီး ရောင်းအားတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာစိတ်ကူးဆန်းသစ်မှုဆိုတာဟာအရမ်းကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်နော်။ အဲ့လိုမျိုး စိတ်ကူးဆန်းသစ်ပြီး တခါမှတောင်မမြင်ဖူးမကြားဖူးတဲ့ ထူးထူးခြားခြားကြော်ငြာလေးကို ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီ ကတော့ 3Mလို့ခေါ်တဲ့ ကျည်ကာမှန် ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကြော်ငြာတဲ့ပုံကရိုးရှင်းပါတယ်။ ဘယ်TVလိုင်းကမှလည်းလွှင့်စရာမလိုသလို ဘယ်မင်းသားမင်းသမီးမှလည်းငှါးစရာမလိုပါဘူး။ ကံကောင်းရင် ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှတောင်မကုန်မယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်းကြော်ငြာလေးပါ။ပိုက်ဆံ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း (၃၀)ကို အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကား ဂိတ်တစ်ခုရဲ့အနီးမှာ သူတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီ ထုတ် ကျည်ကာမှန်တွေကို စနစ်တကျအခိုင်အမာတပ်ဆင်ထားပြီး စာတစ်ကြောင်းပဲရေးပြီးကြော်ငြာခဲ့တာပါ။စာကတော့ "ဤမှန်ကိုသင်ခွဲနိုင်လျှင် အထဲမှဒေါ်လာသန်း(၃၀)ကို သင်ယူသွားပါ"တဲ့ဗျာ။
ဘယ်လောက်တောင်မိုက်လိုက်တဲ့နည်းလဲနော်။လူတွေရဲ့လောဘကို အသုံးချပြီးနာမည်ယူသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပေမယ့် အဓိကကတော့ ဉာဏ်ကောင်းလွန်းခဲ့တာပါဗျာ။ ဒီကုမ္ပဏီဟာလည်း ဒီကြော်ငြာကြောင့်ပဲ အရမ်းကိုနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး ကားထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကတောင်လာရောက်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကဲ... ပရိတ်သတ်ကြီးသာဆိုရင်ကော ဒီပိုက်ဆံ ဒေါ်လာသန်း(၃၀)ကိုဘယ်လိုအရယူမလဲ? ခွန်အားနဲ့ မရရင်တော့ ဉာဏ်အားသုံးရမယ်ထင်တာပါပဲနော်...
Source : Paul Spoerry